कोरोना भाइरसः केही दिन छोडिदिनुस् पत्रिका पढ्न, के पत्रिकाबाट कोरोना फैलिँदैन ?
काठमाडौं– कोरोना संक्रमणका कारण अहिले विश्व तर्सिएको छ । जुन रफ्तारमा कोरोना भाइरस संक्रमण भइरहेको छ, त्यसले नेपाललाई पनि चिन्तित बनाउने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
अब कोरोनाबारे सूचना दिइरहेका छन्, पत्रपत्रिकाले पनि । नेपालमा केही साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले त आफ्नो प्रकाशन केही समयका लागि बन्द गर्ने नै निर्णय गरिसकेका छन् ।
यहीबीच दैनिक पत्रिकाहरु चाहिँ निस्किइरहेका छन् ।
तर, के पत्रिकाबाट कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदैन ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनले निकालेको एड्भाइजरीमा चाहिँ पत्रिका पढ्दा फरक नपर्ने बताइएको छ । तर, यो कुरा विकसित मुलुकको हकमा बढी लागू हुन्छ । किनकि त्यहाँ मोर्डन प्रिन्टिङ प्रेसहरु छन् जसले अत्याधुनिक प्रविधि अपनाएका छन् । नेपालमा भने पछिल्ला प्रेसहरु भित्रिइसकेका छैनन् ।
फेरि पत्रिका छापिने पो प्रेसमा हो त । प्रेसबाट ती पत्रिका हाम्रो घरसम्म आइपुग्दा अनेक व्यक्तिले छोएका हुनसक्छन् जो स्यानिटाइज गरिएका नहुन सक्छन् । त्यसैले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि केही दिन पत्रिका नपढ्ने सुझाव विश्वका विभिन्न देशका विज्ञहरुले दिएका छन् ।